China Mpụga uwe onu Chock valvụ ụlọ ọrụ na-emepụta | Cepai
Standard Chock valves dị na API 6A 21th mbipụta ọhụrụ, ma jiri ihe kwesịrị ekwesị maka ọrụ H2S dịka ọkọlọtọ NACE MR0175.
CEPAI's Chock valves include Positive Chock Valve, Kemeghi Chock Valve, Mkpa Chock Valve, Mpụga uwe onu Chock valvụ, ndị a valves na-nyere site CEPAI na mba dị iche iche, na niile aghụghọ dị ka kwa API6A Spec nditịm, Ọzọkwa, anyị nwere ike chepụta ma mee ndị pụrụ iche chock valves dabere na dị iche iche chọrọ. Ha oche na agịga valvụ mere site ike alloy, nke mma corrosion-eguzogide, flushing eguzogide arụmọrụ, na ihe onwunwe nke trotul nozulu mere nke ceramik ma ọ bụ ike alloy, na torque nke onu ụdị ịkpagbu valvụ bụ obere torque, ọ nwere ike ma gbanwee ma bepụ. mmiri mmiri wdg, na-achịkwa ọnụego ọsọ ọsọ site na dochie nchacha ncha nke nha dị iche iche.
Ọkwa nkọwapụta ngwaahịa: PSL1 ~ 4 Ihe Klaasị: AA ~ FF Ọrụ Nchọpụta: PR1-PR2 Okpomọkụ Klaasị: LU
Imp Obere impaction na mkpọtụ nke ọmụmụ
◆ Ihe ndi mmadu na aru ha bu ihe eji eme ka carbon steel, alloy steel, steel steel na duplex steel steel
Options In-line ma ọ bụ akụkụ ahụ nhọrọ
Enwere ike iji valvụ rụọ ọrụ na eletriki ma ọ bụ nke na-eme ka ikuku
A na-emechi igwe mechie metal dika ANSI klas VI & V
Aha Chock Valve
.Dị Ezigbo Chock Valve / Kemeghi Chock Valve / Mkpa Chock Valve / Mpụga uwe onu Chock valvụ
Nrụgide 2000PSI ～ 15000PSI
Dayameta 2-1 / 16 "～ 7-1 / 16" (46mm ～ 230mm)
Chock dị mma
• Ubi akakabarede ngwa iwu si nti ka mgbanwe mkpagbu na Anglịkan.
• Bonnet nut na oghere oghere maka nchekwa n'oge ọrụ.
• Isi / ihe nchara gụnyere, carbon carbon, steel alloy, steel nchara na duplex anaghị agba nchara iji dabaa ngwa dị iche.
Increga n'agbata dayameta nke bean nke 0.4 mm (1/64 na) ruo 50.8 mm (128/64 na).
Ihe dị iche iche nke owuwu agwa
• igwe anaghị agba nchara • Satellite jikọtara • Efere jikọtara • Tungsten carbide agbakọta
Mwube nke agwa maka agwa agwa choro
Gas Ebuli ịkpagbu
Gas inwego eru akara valves na-mere ma na-akara na n'akuku ahụ nhazi na Flange, threaded ma ọ bụ weld ọgwụgwụ njikọ.
Na a dịgasị iche iche nke mkpụbelata nha na ihe, ndị a valves iji a profaịlụ plọg na-akpụ akpụ n'ime a oche ịdị iche iche eruba nso si otú na-enye ezi eruba akara.
JVS akara valvụ aghọwo nhọrọ nke nhọrọ na ọtụtụ nrụnye gas.
Pagbụ & onu Chock valvụ
Ihe nkwụnye ahụ na ngwe ahụ na-eji plọg siri ike nwere oghere na-eme ka nrụgide na-agagharị n'ime oghere iji chịkwaa. Nke a imewe na-enye kacha eruba ikike maka onu mkpụbelata mkpagbu valvụ. Na ọnọdụ emechiri, plọg ahụ na-agbada na-emechi ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị na oghere ahụ ma na-eme ịkpọtụrụ na mgbanaka oche iji nyefee mmechi dị mma. A na-etinye Flow n'ime mkpụbelata site na ọdụ ụgbọ mmiri na impinges n'etiti etiti mmiri ahụ.
Externaldị ogwe aka ụdị dị iche iche na-eji akwa mmiri na-agagharị na mpụga nke oghere iji jikwaa mmiri. Ihe eji eme ihe eji eme ka ihe di elu (nke di nma tungsten carbide) nke di n'azu aka uwe ya ma site na uzo di elu na-ekwusi ike mechie ya na ndu oche di ogologo. Ihe na-achịkwa (eriri aka) na-agagharị n'ọchịchị ọsọ ọsọ dị ala ma na-eduga na mgbochi mbuze nke atụmatụ mkpụbe a. Ngwa nke chokes ndị a gụnyere nsị dị elu na mmiri mmiri na ihe ndị siri ike dị ka ájá e guzobere. A na-enyekarị mkpụbelata a na tungsten carbide
Nke gara aga: SALO IHE Nyochaa valvụ
Osote: Na-agbasawanye Site na Valve Gate Valve maka API6A Standard